▼ Aug5- Aug 12 (22)
အင်တာနက်လိုင်းပါသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ တစ်ရက်လေ...
အင်တာနက်မှ ချစ်သူချင်း အနမ်းတုံပြန်နိုင်စွမ်းရှိသည...
မလေးရှားမှာ ဗမာကို လှည်လှီးသတ်တဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက် ...
Freedom News Group သတင်းအမှားဖြင့် ပြည်သူတွေကို လှ...
မောင်တောဒေသတွင် ဘင်္ဂလီများက ရခိုင်များကို ၀ိုင်းရို...
နိုင်ငံခြားသားကိုယူရတာ ဂုဏ်ယူတဲ့ ညီမငယ်များအတွက်
မြန်မာမတွေ နိုင်ငံခြားသားကိုယူတာ ဂုဏ်ယူကုန်ကြပြီ
ကျေးရွာ (၁၈) ရွာမှ တစ်ရွာတယောက် KIA ထံ တပ်သားသစ် ပ...
ခန့်စည်သူ နဲ့ စိုးမြတ်သူဇာတို့ပြောတဲ့ ၈၈ ဖြစ်ရပ်မှ...
၈၈ ကျောင်းသားတွေ စစ်တပ်ကိုဝင်စီးခဲ့ကြောင်း သမိုင်း...
၁၉၈၈ တုန်းက ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေ ခေါင်းဖြတ်သတ်...
၁၉၈၈ မှာ ရဲတွေ ဒီလိုခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်.အဆောက်အဦတွေဒ...
အသုံးမကျတဲ့ အိုင်စီတီ ဂျာနယ်..ဒါနဲ့များ မီဒီယာသမား...
NLD ဆိုတာ သချာင်္ပုံသေနည်းနဲ့တွက်ရင် သူတောင်းစား သာသ...
မလေးရှားက ဟက်ကာတွေ ဖေ့ဘုတ်တွင်တိုက်ခိုက်.မြန်မာဘော...
ဘင်္ဂလီများ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် ယုတ်မာပက်စက်မှု အမှုတွဲတချို့...
ဒေါ်စု အတွက် မျောက် အုန်းသီးရတဲ့ အကွက်ကြုံပြီ
မြန်မာပြည် သတင်းထောက်များပါဖောမန့်ကနေပြောတဲ့ သူတို...
"ကိုသိန်းစိန်က ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပယ်လုပ်တဲ့ လူမျို...
” ပျော်ဘွယ်မြို့တွင် အစ္စလာန် ဘာသာဝင်များမှ မြန်မာ ...
အင်တာနက်လိုင်းပါသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ တစ်ရက်လေးဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ငှားနိုင်
အင်တာနက်လိုင်းပါ SIM Card များကို ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက စပေါ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝ ပေးချေပြီး ငှားရမ်းခအဖြစ် တစ်နေ့အမေရိကန် ဒေါ်လာလေးဒေါ်လာ ပေးချေရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်တာနက်လိုင်း မပါသော SIM Card များငှားရမ်းမည်ဆိုပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ဝ နှင့် ဟန်းဆက် ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ဝ ကို စပေါ်ငွေအဖြစ် ပေးချေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုင်းမပါ သော SIM Card များကို တစ်နေ့ငှားရမ်းခ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်ဒေါ်လာ၊ ဟန်းဆက်ငှားရမ်းခ တစ်နေ့အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်ဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်တာနက်မှ ချစ်သူချင်း အနမ်းတုံပြန်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ကိရိယာနှင့်ဆော့ဝဲလ်အား ဂျပန်တီထွင်ခဲ့
အင်တာနက်ပေါ်မှ တစ်ဆင့် အနမ်းချင်းဖလှယ်နိုင်သော ကိရိယာကို ဂျပန်ကျောင်းသားတစ်ဦး စတင် ဝေးကွာနေသော ချစ်သူစုံတွဲများ အင်တာနက်ပေါ်မှ တစ်ဆင့် နှုတ်ခမ်းခြင်း ထိကပ်နမ်းနိုင်သော ကိရိယာတစ်ခုကို သိပ္ပံဘွဲ့ရ ဂျပန်ကျောင်းသား တစ်ဦးက တီထွင်လိုက်ကြောင်း Daily Mail သတင်း အရ သိရသည်။ အဆိုပါကိရိယာလေးသည် အသက်ရှူထုတ်ခိုင်း၍ အရက်သေစာ သောက်စားထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ယာဉ်ထိန်းရဲများ အသုံးပြုကြသော breathalyser ကိရိယာနှင့် ဆင်တူသလို ခလုတ်ခုံလေးတစ်ခုနှင့် ပါးစပ်အတွင်း ငုံရသော ကော်ချောင်းတစ်ချောင်း ပါရှိသောကြောင့် ကလေးရေဘူးတစ်ခုနှင့်လည်း ဆင်တူသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
အသုံးပြုမည့် သူနှစ်ဦးစလုံး၌ အဆိုပါ ကိရိယာမျိုး ရှိနေရန် လိုအပ်ပြီး အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရမည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ထိုသို့ ချိတ်ဆက်ပြီးလျှင် ပါးစပ်အတွင်း ငုံထားသော အဆိုပါ ကော်ချောင်းငယ်ကို တစ်ဦးက လျှာဖြင့် တို့ထိ လှည့်ပတ်လျှင် တစ်ဖက
်လူ၏ ပါးစပ်အတွင်းရှိ ကော်ချောင်းလေးကလည်း တူညီသော ပုံစံဖြင့် လှုပ်ရှားလည်ပတ်မည် ဖြစ်ပြီး အနမ်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တူသော ခံစားမှုကို အပြန်အလှန် ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄င်း၏ တီထွင်မှုသည် လူလူချင်း အပြည့်အ၀ ထိတွေ့မှု ရှိသော အင်တာနက်အတွေ့အကြုံ (full person-to-person web experience) များ၏ ပထမ အစဦးဖြစ်ကြောင်း၊ လူကြိုက်အထူးများသော ကျော်ကြားသူများ (ဥပမာ ဂျတ်စတင်ဘီဘာ) ၏ အနမ်းကို သူ၏ ချစ်ပရိသတ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားကာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မည် ဖြစ်သလို ဝေးကွာနေသော ချစ်သူစုံတွဲများအတွက် အလွမ်းပြေ အတွေ့အကြုံ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး လူကြိုက်များကြမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း တီထွင်သူ ကျောင်းသား နိုဘူဟီရို တာကာဟရှိက ပြောပြခဲ့သည်။
လက်ရှိ၌ You Tube ဗီဒီယိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်၌ ၄င်းကိုယ်တိုင် သရုပ်ပြရိုက်ကူးထားသော အနမ်းပို့လွှတ်ခြင်းကိရိယာ အသုံးပြုခြင်း ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ လူကြိုက်များ နေကြောင်း အင်တာနက်သတင်းများ အရ သိရသည်။ ၄င်း၏ တီထွင်မှုကြောင့် မကြာခင် ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် e-kiss ဟူသောစကား ခေတ်စားလာဖွယ် ရှိလေသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:40 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = သတင်း, သုတကဏ္ဍ
မလေးရှားမှာ ဗမာကို လှည်လှီးသတ်တဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက် ကုလားတွေ
ဒီလ ဩဂုတ်လ ၈ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ရှားအလမ်မှာ ဗမာတစ်ယောက်ကို သူအလုပ်လုပ်တဲ့ ဝပ်ရှော့ရှေ့မှာ လူတစ်စုက လည်လှီးပြီးသတ်သွား ခဲ့ပါတယ် လို့မျက်မြင် သက်သေတွေထွက်ဆိုချက်အရသိရပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ ဗမာတိုင်းရင်းသားကို လည်လှီးသတ်သွားတဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက် ကုလား စူလ်တန် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ကျူးလွန်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ဓားကတော့ မှူခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘဲတွေ့ခဲ့ပါ တယ်။ အနီးနားက ဘဏ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုအထောက်အထားမှ တဆင့် ဆက်စပ်ပြီး အမှူကျူးလွန်ရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားခြောက်ယောက်ကိုလည်း အဲဒီနေ့ညနေ ၇နာရီက နေ ၁၁နာရီအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တာဝန်ရှိသူများက ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အသက်နှစ်ဆယ်ဝင်းကျင်ရှိ (ပုံပါ) မြန်မာနိုင်ငံသား "စူလ်တန်" ဆိုသူကို ဒီအမှူအတွက် ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ပါတ်သက်လို့သတင်းပေးလိုပါက ရှားအလမ်ရဲစခန်း ၀၃-၂၀၅၂ ၉၉၉၉ ကိုဆက်သွယ် သတင်းပေးနှိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ပန်ကြားပါရစေ, သတင်း, ပေးစာကဏ္ဍ
Freedom News Group သတင်းအမှားဖြင့် ပြည်သူတွေကို လှည့်ဖြားဖို့ကြံ
သမ္မတ၏ နှုတ်ထွက်ရန် ဖျောင်းဖြမှုကို ဦးကျော်ဆန်း လက်မခံ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တဲ့ ဒီနေ့မှာ Freedom News Group ၀က်ဘ်ဆိုက်ကနေ တင်လာတဲ့ သတင်းကို Facebook မှာ ဖြန့်နေတာတွေ့ရလို့ အဲဒီ သတင်းဟာ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်း တစ်ဦး အနေနဲ့ အခုလို ရှင်းလင်း တင်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ သတင်းမှာ “အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်မြို့၏ သမ္မတအိမ်တော်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းအား ဖိတ်ခေါ်ပြီး နှုတ်ထွက်ပြီး အနားယူရန် တိုက်တွန်း သော်လည်း ဦးကျော်ဆန်း က ငြင်းဆန်ခဲ့သည်” လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
FNG ရဲ့ သတင်းမှားများ
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းဟာ မနက် ၉ နာရီခွဲမှာ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပွဲကို တက်ရောက်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ပြီး အဲဒီက ပြန်လာတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲကနေ ၁နာရီခွဲ အထိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန Call ခန်းမှာ မြောက်ကိုရီးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မီဒီယာ ကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆွေးနွေး မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးပြီးချင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာ ၀န်ကြီးအားလုံးတက်ရောက်ရတဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ (ကတ်ဘိနက်) အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၂ နာရီမှာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ညနေ ၄ နာရီမှာ အစည်းအဝေးပြီးလို့ ရုံးကို ပြန်လာ၍ ရုံးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အခု ဒီဖြေရှင်းချက်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်အထိ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာ ရုံးမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Freedom News Group ၀က်ဘ်ဆိုက်ကနေ တင်တဲ့ သတင်းနဲ့ အခု Facebook မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဒီနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီမှာ သမ္မတကြီးက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကို ခေါ်တွေ့ပြီး နှုတ်ထွက်ရန် ဖျောင်းဖြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ သတင်းမှားကြီး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းမှာ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီးတဲ့ သတင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
( ဦးမြင့်ကျော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး )
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 1:21 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မောင်တောဒေသတွင် ဘင်္ဂလီများက ရခိုင်များကို ၀ိုင်းရိုက်သတ်နေသော ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပြီ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 12:00 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = Video ဖိုင်, သုတကဏ္ဍ
နိုင်ငံခြားသားကို ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ ညီမငယ်တွေ
စောင့်လေမျိုးနွယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသင်ပေးနိုင်တဲ့ အိမ်က အမေ့ကို ပြန်ပါးရိုက်လိုက်ကြပါ ။
အဲလိုမိန်းကလေးတွေကို မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရက်နဲ့ တားဆီးနိုင်တဲ့ ဆုံးမနိုင်တဲ့ အခွင့်ရှိပါလျှက်နဲ့ မပြောမဆိုမတားမဆီးတဲ့အပြင် မြှောက်ပေးတဲ့ မြန်မာမ လေးများလည်း ကိုယ့်ရုပ်ကို ဒါးနဲ့လှီးထုတ်ပါ ။မြန်မာ ပြည်ကို ကျောခိုင်းပြီး နိုင်ငံခြားသား ခံယူပါ ။ မြန်မာမှန်လျှင် မြန်မာဂုဏ်နဲ့ မြန်မာမျိုးကို ထိန်းပါ ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:00 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = Video ဖိုင်, ပန်ကြားပါရစေ
ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်မသွားမှတော့ နောက်နွားတွေလည်း ဘယ်သွားတော့မလဲလေ..
နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဖခင်ကြီးရဲ့သမီးရင်းက စောက်တလွဲလုပ်မှတော့ ခေတ်လူငယ်တွေ စောက်တလွဲတွေ
အခုလည်း ခေတ်လူငယ် အသိမကြွယ်သေးတဲ့ ကလေးမတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားသားယူတာ အားကျပါသတဲ့
သူငယ်ချင်းမ်ိန်းကလေး မြန်မာမ တစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားသားနဲ့Living Together ဖြစ်နေတာကို တားဆီး
ခြင်းမရှိပဲ သူကိုယ်တိုင် ဂုဏ်ယူဝမ်းပမ်းတသာ နဲ့ အဲဒီဓါတ်ပုံကိုယူပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ လိုက်ဖြန့်ပြီး ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ
၀င်နေပါသတဲ့..Like ဆိုတဲ့ button ရအောင် များများယူပြီး ဆုလိုချင်ပါသတဲ့...မလုပ်ကောင်းမှန်း လုပ်ကောင်းမှန်း မသိပဲ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အကြောင်းနားမလည်တာလည်းဖြစ်နိုင်သလို စောင့်လေမျိုးနွယ်..ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ထည့်မပေးနိုင်တဲ့ အမေတစ်ယောက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ကိုယ်တိုင်တော့ ကြိးကြီးကျယ်ကျယ်တွေရေးပြီးနေတတ်ပေမယ့် မြန်မာအမျိူးသမီးတစ်ယောက်နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဒီလိုဖြစ်တာ
ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်မှန်းတော့ သိပုံမရသလို မြန်မာအမျိူးသမီးဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ငယ်နေပုံရပါတယ်...မြန်မာ
အမျိူးသမီးတန်ဖိုးကို သေသေချာချာ မသိတော့တာ သေချာပါတယ်လေ..။
ဒါကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ လူငယ်တွေ အများကြီးရှိနေတဲ့ အာဆီယံpage ထဲမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားငမ်းငမ်းတတ်လိုချင်တာ..နိုင်ငံခြားသား ရရင်ဂုဏ်ယူတာ ဆိုပြီး ဖြန့်ဝေထားတဲ့ လင့်ခ်ပါ ..။
အောက်ပါပုံကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဓါတ်ပုံမဟုတ်ပါဘူး.သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာတင်ပြီးကြွားထားတဲ့ ပုံပါ..။
ဒါကတော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာကောင်မလေး အကောင့်ပါ..Nicki han ဖြစ်ပါတယ်..။http://www.facebook.com/nicki.han။
သူမကတော့ ဒီလိုရေးထားပါတယ်..Name: Nicki Han.
Hometown : Yangon, Myanmar.
My current location is Seoul,South Korea.
'' This isapicture of my boyfriend and I, celebrating our anniversary
on Bagan Tower.Bagan Tower is located in Bagan, which isasacred ancient city of Myanmar...။အောက်ပါပုံကတော့ ထိုကလေးမရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ရတဲ့သူသူငယ်ချင်းအတွက် ၀မ်းပမ်းတသာ ဂုဏ်ယူပြီး သူများတွေကိုပါ အားကျဖို့
ပြောဆို အတုယူမှားအောင် ဖြန့်ဝေနေတဲ့ကောင်မလေး လုပ်ရပ်ပါ..အဲဒီမှာ ကန့်ကွက်သူများရှိသလို တမင်ဆော်ကြောင်ပြီး ရေလိုက်ငါးလိုက်လုပ်တဲ့အပြင် အားပေးထားတဲ့ အမျိူးယုတ် ယောကျာင်္းလေး မိန်းခလေးတွေကိုပါ တွေ့ရပါ့မယ်..။
ဒါကတော့ ဖြန့်ဝေနေသူကောင်မလေးနဲ့ ဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းကြောင်းပြောသူတွေကို ပြန်လည်ရန်တွေ့နေသူကောင်မလေး(မြန်မာစင်စစ်ပါ) ဖြစ်ပါတယ်..။
အင်းပေါ့လေ....ရှေ့ဆောင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ သမီးတော်ကမှ နိုင်ငံခြားသားယူပြီးနိုင်ငံခြားသားမှန်ရင် ရင်သပ်ကျောပွတ် ပေါင်ပွတ်ပြီး အာဘွားရှလူးနေမှတော့ ဘုမသိဘမသိကောင်မလေးတွေ အားကျကုန်တာ အနာဂတ်မြန်မာပြည်အတွက် ရင်လေးစရာပါ...။
ဒီရှေ့ဆောင်နွားကမှ ဖြောင့်ဖြောင့် မသွားတာ
ဒီနွားတွေကလည်း ရှေ့နွား ခြေရာ လိုက်နင်းတာ အဆန်းလား
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:56 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ, ပန်ကြားပါရစေ
ကျေးရွာ (၁၈) ရွာမှ တစ်ရွာတယောက် KIA ထံ တပ်သားသစ် ပို့ဆောင်ရ
ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာ (၁၈) ရွာမှ တစ်ရွာတယောက်နုန်း ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ထံ တပ်သားသစ် ပို့ပေးရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မန်ဝိန်းကြီး ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းမှ လူငယ် (၁၈) ဦးအား KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အခြေစိုက်ရာ ပန်ခမ်းကျေးရွာသို့ ရပ်ရွာလူကြီးများကိုယ်တိုင် သွားရောက် ပေးပို့ခဲ့ရသည်ဟု မန်ဝိန်းကြီး ဒေသခံ တဦးက အခုလို ပြောသည်။
“တစ်ရွာတယောက် မပေးလို့ကို မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ရွာလူကြီးတွေကနေ ရှာဖွေထားပေ့ါ။ မပေးရင် ရပ်ထဲရွာထဲဝင်ပြီး အနိုင်ကျင့်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ ရွာလူကြီးတွေ စုပြီး သွားပို့ပေးလိုက်ရပြီ။ အားလုံး (၁၈) ယောက်။”
မြန်မာပြည်မှ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် နောင်တောင်းမြို့သို့ ၀င်ထွက်သွားလာရာ လမ်းကြောင်း ပေါ်ရှိ နောင်မွန်းကျေးရွာ လမ်းဆုံတွင် ယခင်လ (၁၇) ရက်နေ့က KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အင်အားသစ် စုဆောင်းခဲ့ရာ လူငယ် (၆၅) ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ကျေးရွာအလိုက် ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င်အကျဉ်း ကောက်ယူခဲ့သည်။
အဖမ်းခံရသူများ ထိုညက ပြန်လည်ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရာ ၎င်းတို့နေထိုင်သည့် ကျေးရွာများမှ တစ်ရွာတယောက်နုန်း အင်အားသစ် ထည့်ဝင်ရမည်ဟု KIA တပ်ဖွဲ့က အကြပ်ကိုင် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း မန်ဝိန်းကြီး ဒေသခံက အခုလို ပြောဆိုသည်။
“ရွာလူကြီးတွေကို လာပြောတယ်။ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူတွေကို ပြန်ခေါ်ပေးပါ။ မခေါ်ပေးရင် သူတို့ မိဘတွေကို ခေါ်ထားရမယ် ဘာညာဆိုပြီး ပြောလာတယ်။ ရွာလူကြီးတွေကလည်း ခေါ်လို့မရဘူးထင်တယ်။ သူတို့ဘယ်ကို ထွက်ပြေးမှန်း ကျနော်တို့လည်း မသိဘူးလေ။ အိမ်ကိုလည်း ပြန်မလာဘူးလို့ ပြောပြတာပေ့ါ။ နောက်ဆုံး တရွာတယောက် ပေးရမယ်တဲ့။ မပေးလို့မရဘူးပေ့ါ။ တရွာတယောက် ပေးပြီးမှပဲ အဲဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူတွေ သူ့ရွာ ကိုယ့်ရွာ ပြန်လာနေလို့ရမယ်လို့ ပြောတယ်။”
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ကျေးရွာများဖြစ်သည့် ကွတ်လုံ၊ ကွန်းခမ်း၊ ပန်ခမ်း၊ နောင်မွန်း၊ မန့်လယ်တိုက်၊ နမ့်မဟီး၊ ဆွန်ဖား၊ နောင်ကျွန်း၊ ၀မ့်စန့်၊ ဟိုဟင်၊ ဖာစန့်၊ နောင်နွမ်၊ နောင်နုတ်၊ နားလုံ၊ မန်ဝိန်းကြီး၊ မန့်မွမ်း၊ မန့်ဟွေ့၊ မန့်မိုင် စသည့် ကျေးရွာများမှ ပို့ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့အနက် ဖာစန့်၊ နောင်နုတ်နှင့် မန်ဝိန်းကြီး ကျေးရွာများတွင် မြန်မာ အစိုးရတပ်များ အခြေစိုက်ထားသော်လည်း မကြာခန ဆိုသလို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ထွက်သွားလာ မှုရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အခြေစိုက်ရာ ပန်ခမ်း ဂိတ်သို့ ဖြတ်သန်း သွားလာသည့် ခရီးသည်များအား KIA က ဖမ်းဆီး၍ အင်အားသစ် စုဆောင်းနေကြောင်း မူဆယ် ဒေသခံများက ပြောသည်။ သို့သော် အသက် (၁၆) နှစ်အောက် ကလေးငယ်များနှင့် တရုတ် လူမျိုးများကိုမူ ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိစ္စ KIA တပ်ဖွဲ့၏ ဦးဆောင် ပါတီဖြစ်သော ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တာဝန်ရှိသူများထံ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါ။
ခန့်စည်သူ နဲ့ စိုးမြတ်သူဇာတို့ပြောတဲ့ ၈၈ ဖြစ်ရပ်မှန်
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 2:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
၈၈ ကျောင်းသားတွေ စစ်တပ်ကိုဝင်စီးခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသက်သေ(ဗီဒီယိုဖိုင်)
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:34 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
၁၉၈၈ တုန်းက ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေ ခေါင်းဖြတ်သတ်ကြပုံ(ဗီဒီယိုဖိုင်)
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:28 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
၁၉၈၈ မှာ ရဲတွေ ဒီလိုခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်.အဆောက်အဦတွေဒီလိုဖျက်ဆီးခံရတယ်
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:26 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
အသုံးမကျတဲ့ အိုင်စီတီ ဂျာနယ်..ဒါနဲ့များ မီဒီယာသမားတွေက ရေးချင်တာရေးမယ်တဲ့
အခုမီဒီယာသမားတွေကို စာပေစီစစ်ရေးက ရှိနေတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ဆန္ဒတွေပြကြတယ်
အင်တာနက်ပေါ်တတ်လာတော့ ဆန္ဒပြတာတဲ့..သောက်ရှက်က မရှိဘူး..ပြီးတော့ သူတို့ပဲ ရဲနဲ့တွေ့တော့
သူငယ်ချင်းအလှူသွားသလိုလို လမ်းလျှောက်သလိုလိုနဲ့ ဖာသယ်မ ပါးစပ်လို ဗလောင်းဗလဲနဲ့ မီဒီယာတွေ..
ပါးစပ်ထဲမှာ မစင်အပြည့်နဲ့..။ ဟော..ကြည့်..ပြောရင်းဆိုရင်း လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ..သောက်တလွဲ အိုင်စီတီ ဂျာနယ်..တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ခေါ်ယူ ဆိုတဲ့သတင်းမှာ ကေအိုင်အေ က ပုံတွေလာတင်ပြီး ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဖြန့်ချလိုက်တယ်.မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာစစ်တပ် ဗိုလ်လောင်းတောင် မမြင်ဖူးးဘူးထင်တယ်..တယ်လည်း ဗဟုသုတ နည်းတဲ့ ဂျာနယ်..အဲဒီလို ပုစွန်ဆိန် ဦးနှောက်နဲ့ လူတွေ ဗဟုသုတ နည်းတဲ့သူတွေ ထုတ်တဲ့ ဂျာနယ်က အိုင်စီတီ တဲ့..ကြည့်ရတာ အင်တာနက်မှာ သူများရေးပြီးသား အိုင်တီ အသိပညာတွေကို စုစည်းပြီးထုတ်တာပဲနေမှာပါ..ကိုယ်တိုင် အစွမ်းအစ အသိဥာဏ် ဗဟုသုတ ရှိပုံမရဘူး..။
ဆင်ကလေးမွေးဆိုပြီး ခွေး၂ကောင်မိတ်လိုက်တဲ့ ပုံတင်တာကျနေတာပဲ..ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်..။
ရတဲ့သတင်းတွေကို အင်တာနက်က ဒေါင်းလုတ်ချပြီး (ဓါတ်ပုံ့-သတင်း-အင်တာနက် )လို ရေးတာလည်း မြန်မာ မီဒီယာများပဲ ရှိသကိုး ။ ကင်မရာလေးကိုင်တာနဲ့ ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်ဖြစ်ပြီ
မှတ်နေတယ် ။ အာသွက်လျှာသွက်မေးတတ်တာလေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတင်းထောက်ဖြစ်ပြီ မှတ်နေတယ်..အဲဒါကြောင့်လည်း မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးဆီမှာ ပါးချခံရတာ..မိန်းမချင်း မစာမနာ ..Hotဖြစ်ရင် ဂျာနယ်ဝင်ငွေကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ သောက်ချီးထုပ် အတွေးအခေါ်ပဲ ရှိတာကိုး..။အဲဒီလို ဂျာနယ်တွေက အဲဒီလို မီဒီယာသမားတွေက ဂျာနယ်ဝင်ငွေကောင်းရင်ပြီးရောပဲ လုပ်တတ်တာကတော့ လွန်လွန်းသဗျ။အခုလို ရေးချင်တိုင်းရေးတာက သောက်တလွဲလုပ်တာက အမှန်တင်ပြမယ့် စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ကြီးတဲ့လားဗျာ..ရှက်တတ်ရင် အိုင်စီတီ ဂျာနယ်က ပုစွန်ဆိတ်ချီးခေါင်းနဲ့ အယ်ဒီတာတွေ စာစီသူတွေ နဲ့ မီဒီယာသမားတွေ အိမ်ကိုပြန် ..ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ ဖင်ဆောင့်သေဖို့ကောင်းနေပြီ ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 3:36 AM4ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
NLD ဆိုတာ သချာင်္ပုံသေနည်းနဲ့တွက်ရင် သူတောင်းစား သာသာပါ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:00 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ, သရော်စာ
မလေးရှားက ဟက်ကာတွေ ဖေ့ဘုတ်တွင်တိုက်ခိုက်.မြန်မာဘောလုံးFun page တစ်ခု ပျက်စီး
FACEBOOK တွင်ရှိသော Page များရဲ့ Admin များခင်ဗျာ.. အောက်ဖော်ပြပါ Message ရောက်လာရင် လုံးဝ မနှိပ်ပါနဲ့... Malaysia က ကုလားဟက်ကာတွေက မိမိတို့ Page ကို Hack ဖို့ပို့လာတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
လောလောတယ် Myanmar National Football Team ကို Hack ခံထိထားပါတယ်။ပြီးတော့ မြန်မာ ဘောလုံးပရိသတ်တွေကပဲ ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂလီသူခိုးတွေဘက်ကအော်သလိုလို ၀င်ရေးသွားပါတယ်..သတိထားကြပါ ခင်ဗျား ။
hack ခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ page
ဘင်္ဂလီများ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် ယုတ်မာပက်စက်မှု အမှုတွဲတချို့
မှုခင်းကာလ ၁၉၅၂ ခုနှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးမောင်ပွင့်၊ အသက် ၅၀ နှစ်
ာရွာသူကြီးဖြစ်သည်။ ကုလားများသည် ရခိုင်ရွာများ ပြန်လည် တည်ရှိလာခြင်းကို လုံးဝမလိုလားသဖြင့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ကုလားဆိုးများသည် ညအချိန်မီးတုတ်များဖြင့် ၀င်လာကြပြီး ရွာသူကြီးအား သတ်ဖြတ်ကာ အိမ် နှင့်အတူမီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည
မှုခင်းကာလ ၁၉၇၀ ခုနှစ်
်၊ အသက် ၃၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ စေတီတောင်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
ိ မိမိလယ်တဲတွင် ကုလားဆိုးများဝိုင်းခုတ်သတ်ဖြတ်
ခံရသည့် ရခိုင် လယ်ယာသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးကျော်သောင်း(ဘ)ဦးညိုသီး၊ အသက် ၆၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် လယ်ကွင်းတွင်စပါးခင်းများ စောင့်ကြည့်ရင်းအလုပ်လုပ်နေစဉ် ကုလားဆိုးများက၀ိုင်းခုတ် သတ်ဖြတ် ခြင်းဖြစ်သည်။
မှုခင်းကာလ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၆
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးဦးစော(ဘ)ဦးငွေထွန်းဦး၊ အသက် ၄၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ ကျောက်ရန်ကျေးရွာ၊ ဘူသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် ကျေးရွာကောင်စီဥက္ကဌဖြစ်သည်၊ ကျောက်ရန် - ဖုံညိုလိပ်ကွင်းစပ်ရှိလယ်ကွင်းတ
ွင် ထွန်ယှက်နေစဉ် ကုလားဆိုးများဒါးဖြင့်ဝိုင်းခုတ
မှုခင်းကာလ ၁၉၇၉ ခုနှစ်
န်ဦး၊ အသက် ၄၀ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ နွာရုံတောင်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် နေ၀င်ရီတရော လယ်ယာမှအိမ်သို့ပြန်လာစဉ် ကျောက်ရန်တောင်ရွာ ကုလားဆိုးများ လမ်းမှရုတ်တရက် ၀ိုင်း ခုတ်ခံရသဖြင့်သေသည်။
မှုခင်းကာလ ၂၀၀၁ ခုနှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးမောင်ကျော်ဟန်(ဘ)ဦးလှဖော်၊ အသက် ၃၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ နွာရုံတောင်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် ဆင်သေပြင်ရွာတွင် ကုလားဆိုးများ၏၀ိုင်ခုတ်ခံရ၊ အလောင်းကိုရေထဲမျောချထား၊ နောက် တစ်နေ့မှတွေ့ရသည်၊ တရားခံကုလားများတဘက်နိုင်ငံသို့
မှုခင်းကာလ ၁၉၉၇ ခုနှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဒေါ်မြခိုင်(ဘ)ဦးလှထွန်းကျော်၊ အသက် ၄၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ ကြာညိုပြင်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် ဟင်စားရှာသွားစဉ် ငှက်သည်ရွာ ကုလားများဝိုင်းဝန်းပြုကျင့်ပြီ
းဘယ်ဘက်သားမြတ် ဖြတ်တောက်ခံရ သည် နောက်ဆုံးတွင်အသေသတ်ဖြတ်ခံရသည်။
အလောင်းကိုရေထဲမျောချပြစ်သဖြင့် သိမ်တောင်နား တွင် ဆယ်ယူရရှိသည်။
မှုခင်းကာလ ၁၉၈၉ ခုနှစ်
န်း၊ အသက် ၃၅ နှစ်
်၊ အသက် ၁၇ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ ဒုံးသိမ်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် ဒိုင်းကျပ်ရွာကျော်လမ်းတွင် သားဖနှစ်ဦးလုံးကို ကင်းတောင်ရွာကုလားဆိုးများဓါးဖြ
င့်ဝိုင်းခုတ်ခံရသည်။ အဖမှာဒဏ်ရာဖြင့်လဲနေစဉ် လည်လှီးခံရသည်။ သားမှာခေါင်းပိုင်းမဲ့ကိုယ်သာတေ
ွ့သည်။ ခေါင်းပိုင်း ရှာမရ။
မှုခင်းကာလ ၁၉၆၂ နှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးထွန်းလှအောင်၊ အသက် ၆၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ ဖရုံချောင်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် တောတောင်သို့ထင်းရှာသွားစဉ် ကုလားဆိုးများဝိုင်းခုတ်ခံရသဖြင
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးဖိုးထွန်း၊ အသက် ၅၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ ဒု - ကင်းချောင်းကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် နွာကျောင်းနေစဉ် ကုလားဆိုးများရန်ရှာကာ ဓါးဖြင့်ဝိုင်းခုတ်ကြသည်။ ခြေထောက်ပြတ်ကာ ပြေးမရ သဖြင့်လည်လှီးသတ်ဖြတ်ခံရသည်။ တရားခံများအား ရဲမှဖမ်းဆီးမိသည်။တရားစွဲခံရသည်
မှုခင်းကာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးမြဒိုးအောင်၊ အသက် ၅၀ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ အာကာပျံကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် တောင်ကျော်လမ်းတွင် ကုလားဆိုးများဓါးကိုယ်စီဖြင့်ဝိ
ုင်းခုတ်သောကြောင့် စိစိညက်ညက် ကြေမွသေ ဆုံးသည်။
မှုခင်းကာလ ၁၉၉၃ ခုနှစ်
မှုခင်းဖြစ်ခံရသူ မကြာညို(ဘ)ဦးဂေါင်ကိုင်း၊ အသက် ၁၈ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ လက်ပံကိုင်းကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
မှုခင်းဖြစ်စဉ် ရွာနှင့်မနီးမဝေးတွင် ကုလားဆိုးတစ်စု၏ မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည်။ ရွာသားတစ်ဦးတွေ့ သဖြင့် ကျန်ရွာ သားများအားအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းရ
ာ ကုလားများထွက်ပြေးကြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ် သို့ထွက်ပြေးကြောင်းသိရသည်။
မှုခင်းကာလ ၁၉၉၆ ခုနှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးသာဇံဖြူ၊ အသက် ၄၅ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ သပိတ်တောင်ကျေးရွာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
ံရကာ အချက်ပေါင်းများစွာ ချွန်ထက်သော သံထည်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြင့်ထိုးသတ်ခံရသည်။ တရားခံများတဘက်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားသည်။
မှုခင်းကာလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဦးမောင်ဇံ၊ အသက် ၃၃ နှစ်
မှုခင်းဖြစ်နေရာ ခါလာဦး(စိုင်းတင်)၊ ဘူးသီတောင်မြို့နယ်
ံရပြီး ဦးမောင်ဇံနှင့် ကိုးနှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကလေးတို့
အားဓါးဖြင့် ရက်စက်စွာ မသေမချင်းခုတ်ထစ် ခံရသဖြင့်သေဆုံးသည်။
မှုခင်းကာလ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅
သတ်ဖြတ်ခံရသူ မနှင်းယု နှင့်အဖေါ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ အသက် ၂၀
မှုခင်းဖြစ်နေရာ သရဖီ နတလ ကျေးရွာ(သင်္ဂနက်အုပ်စု)၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
အသက်မွေးကြသည်။ ကုလားနော်ဟူဆိန်းကသူ့ခြံတွင်ငရုတ်သီးစိမ်းများ ရောင်ရန်ရှိကြောင်းခေါ်ယူသဖြင့် ၀ယ်ရန်သွား ကြသည်။ နော်ဟူဆိန်းနှင့်အခြားကုလား(၅)ဦး ဖမ်းချုပ်မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ဓါးဖြင့်ခုတ်သတ်ခံရသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ နော်ဟူဆိန်းအားရဲမှဖမ်းဆီးရရှိသည်။ အခြား(၅)ဦး တဘက် နိုင်ငံသို့ပြေးကြသည်။ ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:00 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
သြဂတ်လ ၄ရက်နေ့မှာ အီဂျစ်မှာ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ခရစ်ယာန်လူငယ်တွေ ရန်ပွဲဖြစ်ပွါးရာကနေ
မွတ်ဆလင်လူငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တာကို အကြောင်းပြုပြီး မွတ်ဆလင်လူအုပ်ကြီးဟာ ကားတွေ ကိုမီးရှို့ပြီး ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ နှင်းဆေးရုံများ ကျောင်းများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ် ။
အဲဒီလူအုပ်ဟာ Mohammed Mazhar လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကိုပါ ရောက်ရှိလာပြီး သံရုံးဝင်းထဲကို
ရိုက်ချုိးဝင်ကာ လွင့်ထူထားသော မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအားတတ်ရောက်ဖြုတ်ချကာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြပြီး ဘင်္ဂလီကုလားများအတွက် လက်စားချေမည်ဟု အော်ဟစ်သွားကြပါတယ်။
မြန်မာအလံကိုမီးရှို့ရန်ဖြုတ်ယူနေသော အီဂျစ် မွတ်ဆလင်ကုလား
အီဂျစ်ရှိ မြန်မာ သံရုံးတည်နေရာ
တကယ်ဆိုရင် ဗီယင်နာသဘောတူညီမှုအရ လက်မှတ်ထိုးထားသောနိုင်ငံတိုင်းသည် ထိုတိုင်းပြည်အတွင်းရှိ သံရုံးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိ။
ထို့ပြင် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ဖျက်ဆီးခြင်း
၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရမည်။ (အပိုဒ်း ၃၁)
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည် သူ့နိုင်ငံအခြေစိုက်သံရုံးကို ကာကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ လို့ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှူများရရှိထားပါတယ်။
ထိုသို့သော အရေးအခင်းသည်လည်း အီရန်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အီရန်တွင်ဖြစ်သည်က ဗြိတိသျှသံရုံးအား ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ဗြိတိန်ဘုရင်မပုံကို မီးနှင့်ရှို့၍ ဗြိတိန်အလံအား ဆုတ်ဖြဲမီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ထိုကိစ္စအတွက် ဗြိတိန်အစိုးရက အီရန်မှ တာဝန်ရှိသူများအာားလုံးကို 48 နာရီအတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် ။
ယခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနှင့် သမ္မတကြိးတို့ရဲ့ မျက်နှာကိုပါ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ အီဂျစ်တွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှူကို ကျွန်
တော်တို့ ဘက်မှ မည်သို့ တုံပြန်မည်နည်း ။ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်မှာ၃ ရက်ကြာမြင့်သော်လည်း နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ မည်သည့်သတင်းများထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုပဲ ငြိမ်နေကြတော့မှာလား ။အနည်းဆုံးတော့ အီဂျစ်သံရုံးကို ကျွန်တော်တို့ကလည်း တန်ပြန် အပြစ်ဒဏ်မပေးနိုင်ကြတော့ဘူးလား ။
ပြန်လည်မောင်းထုတ်ကြပါစို့ရဲ့။ ကင်တားနားကို ရခိုင်ပြည်သူတို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလို
မည်သူမျှ မတိုက်တွန်းကြပါပဲ နဲ့ မျိုးချစ်သော စိတ်တွေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် သမ္မတကြီးအတွက် ယခုပဲ အီဂျစ်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြကြပါစို့ ။ အီဂျစ်သံရုံးကို အပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စည်းလုံးကြပါစို့ ။
ဒါကတော့ အီဂျစ်သံရုံးလိပ်စာဖြစ်ပါတယ် ။
အမှတ်(၈၁) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း-(00951)222886 - 222887 - Dir 222296
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 3:00 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ယနေ့ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့တွင် ကော့မှူး မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူ မည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ တစ်ရပ်ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကော်မတီ၏ အဓိကတာဝန်မှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တရားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊ မီဒီယာများကြား တရားဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးနေထိုင်မှု ရှိမရှိကို ကြပ်မတ် ထိန်းကျောင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာက ပြောကြားခဲ့သည်။
(၂) ဦးမန်းမောင်မောင်ဥာဏ် ပန်းတနော် မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးမင်းဆွေ၊ ဒိုက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၄) ဒေါ်ဒွဲဘူ၊ အင်န်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးစိုင်းထွန်းစိန် မိုင်းပြင်း မဲဆန္ဒနယ်
အဖွဲ့ဝင် (၆) ဒေါက်တာရိုအုပ် မတူပီ၊ မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦးခင်မောင်မြင့် ဇီးကုန်းမဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၈) ဒေါ်မိယဉ်ချမ်း၊ ကျိုက်မရော မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၉) ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ၊ တာမွေ၊ မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးစိုးရယ်၊ ဒီမောဆို၊ မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးနယ်လ်ဆင် (ခ) ဦးဆောင်ဆီ ၊ ကျောက်မဲ မဲဆန္ဒနယ်၊
အဖွဲ့ဝင် (၁၃) ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင် (၁၄) ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 12:47 PM2ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မြန်မာပြည် သတင်းထောက်များပါဖောမန့်ကနေပြောတဲ့ သူတို့စရိုက်စိတ်ဓါတ်တွေ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:00 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
"ကိုသိန်းစိန်က ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပယ်လုပ်တဲ့ လူမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး"
နိုင်ငံမဲ့ ရိုဟင်ဂျာများအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ရိုဟင်ဂျာများအား တတိယနိုင်ငံသို့ ပို့မည်။ လာခေါ်မည့်သူမရှိပါက ခြံခတ်ထားမည်ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေ တိုင်းရင်းသားများ၌ လုံးဝပတ်သက် ခြင်းမရှိသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့်ပတ်သက် မိမိ၏ သဘောထားအား အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတကြီး၏ ရပ်တ
ည်ချက်အပေါ် ပြည်သူများမှ လွန်စွာ အားရဖြစ်လျက်ရှိပြီး အချို့သောဒေသ များ၌မူ သမ္မတကြီး၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ထောက်ခံကြိုဆိုသော အားဖြင့် နိုင်ငံတော် အလံများပါလွှင့်ထူခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့ခြင်းနှင့် နိုင်ငံမဲ့ရိုဟင်ဂျာများ အကြောင်းအား သမ္မတကြီး တပ်မတော်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က သမ္မတကြီး၏ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်ဆွေ(ခ) စာရေးဆရာကြီး နောင်စစ်သည်အား မေးခွန်း အနည်းငယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ-
မေး- ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ ဂရက် ရိုက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီးသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရပ် တည်မှုနဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုအပေါ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အလွန်နှစ် ထောင်းအားရဖြစ်ကြပါတယ်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တပ်မတော်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် ဘဘဟာ သမ္မတကြီးရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ တယ်။ တစ်ချိန်က သမ္မတကြီးရဲ့ ဆရာ ဖြစ်ခဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးရဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့မှု အပေါ် ဘယ် လို မြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ- ကိုသိန်းစိန်က Man of Principal ပဲ။ သူက ဟိုးအရင်ထဲက စည်းစနစ်နဲ့ နေတဲ့သူ။ ပြီးတော့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှုလည်း ရှိတယ်။ လောဘဇောတိုက်မယ့် သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကိုသိန်းစိန်အကြောင်းပြောရရင် အရင်နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်လိုပေါ့နော်။ သူက သူအငြိမ်းစားသွားတဲ့အခါကြလို့ ငွေတစ်ပြားတစ်ချပ်ပိုလာရင် ကျွန်တော်ကို ဆဲကြပါ၊ ဆို ကြပါ၊ ထောက်ပြစမ်းပါဆိုတာမျိုးပါ။ ကိုသိန်းစိန်အနေနဲ့ကလည်း ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်း လုပ်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုသိန်းစိန်ရဲ့ သဘောထား အပေါ် အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်For Most People Near Enough is Good Enough. အဲ့ဒါက လူအများစုကတော့ ရိုး ရိုးသားသားနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်လေးရရင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ကြတာပဲ။ နောက်တစ်ခု For few people good enough is never enough. ဒါကတော့ လူနည်းစု တွေက လောဘဇောတွေမသက်နိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးပါ။ ကိုသိန်းစိန်ကတော့ ပထမ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါ။ ကိုသိန်းစိန် ပြောတာတွေကလည်း ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အားလုံး လမ်းမှန်ကမ်းမှန်တွေပါပဲ။
မေး- နိုင်ငံမဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ရော ဘဘ အနေနဲ့ ဘယ်လို ရှုမြင်သုံးသပ်မိပါသလဲ။
ဖြေ- ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘဘတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူး။ ဧည့်နိုင်ငံသားအနေနဲ့ပဲ သူတို့ကို လက်ခံထားတာ။ တစ်ခြား နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် လှေကလေးနဲ့ အတင်း ကမ်းလိုကပ်ပြီး လာကြတာ။ အဲ့သလို လာတဲ့အခါကြတော့လည်း ဥပမာ ယိုးဒယားဆိုပါဆို့။ သူတို့တွေက လှေတွေနဲ့ ၀င်လာပြီး ကမ်းကပ်ဖို့လုပ်တယ်။ အဲ့ဒါ ထိုင်းရေတပ်ကနေပြီးတော့ အတင်းကြိုးနဲ့ ပြန်ဆွဲသွားပြီး ပင်လယ်ထဲရောက်တဲ့အခါ ကြိုးကို လွှတ်ပေးလိုက်ရော။ ဒါ တွေကို CNN တို့ BBCတို့ စတဲ့သတင်းတွေမှာ တွေ့ရတယ်။ ခု ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကနေ ပျက်ယွင်းလာတာပဲ။ ဟိုတုန်းက အိန္ဒိယက မွတ်စလင်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ စောစောစီးစီးကွဲသွားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ မွတ်စလင်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာက ခုဒီထဲကိုတောင် ရောက်နေပြီ။
ဖြေ- ဘဘရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောရ မယ်ဆိုရင် ဘဘနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနဲ့ ရခိုင်ဘူးသီးတောင်မောင်းတောဘက် ရောက်သွားတဲ့အခါ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား က ၃ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။ ဘင်္ဂါလီက တော့ (၉၇)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်။ သူတို့က ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးတွေကို လက်ထပ်ယူထားကြတယ်။ အဲ့ဒါကိုကြည့် ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးရော၊ ဘဘရော စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ။ ဒါမေပယ့် အချိန်က တော့်တော့်ကို လွန်နေပြီ။ ပြောရရင် လူမြိုတာပေ့ါနော်။ လူမြိုတဲ့အခါမှာ လည်း သဘာဝနဲ့ တူညီတဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့ အခါကြတော့ သိပ်ကိုသိသာထင်ရှားတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဘဘတို့ နိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာဆိုရင်လည်း တရုတ် ပြည်၊ အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း သူတို့မြိုထားတာ တော်တော်များတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဘဘတို့ စစ်ဆင်ရေးဝင်တဲ့အခါ ဘဘက ဗိုလ်ချုပ်မှူးလောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းရဲ့ ဒီဘက် ပလောင်တောဝေါ ရောက်လို့ မြေပြင်ပေါ်ကြည့်လိုက်ရင် ရွာတွေက အစက်အပြောက်လေးတွေပဲ မြင်ရတယ်။ အဲဒီအစက်အပြောက်လေး တွေက မြေပြင်မှာတော့ တကယ့်ရွာကြီး တွေပဲ။ အဲဒီရွာရောက်ပြီး သေချာကြည့် လိုက်တော့လည်း တရုတ်တွေကြီးပဲ။ မှတ်ပုံတင်ကြည့်ပြန်တော့လည်း အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်တွေဖြစ်နေပြန်ရော။ ဒါတွေ နားလည်မှု တွေပေါ့နော်။ အဲ့သလို အောက်ခြေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နားလည်မှုလေးတွေကြောင့် တရုတ်ကြီးတွေက မုတ်ဆိတ်ကြီးတွေနဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်။
မေး- ခု ရိုဟင်ဂျာတွေအပြင် အနီးစပ်ရာ နိုင်ငံအလိုက် လူမျိုး မြိုမှုတွေတွေ့နေရပါတယ်။ အဲ့သလိုမြိုလာမှုတွေရဲ့ ရေရှည် အကျိုးဆက်က ဘာများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ- ခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ခုမန္တလေးလို နေရာမျိုးမှာတောင် တရုတ်တွေ မြိုနေပြီ။ အဲ့ဒါအပြင် ဟိုဖက်ကလည်းတစ်မျိုး။ ခု ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမှာစစ်တကောင်းဟိုဘက်မှာဆိုရင် ဒါသူတို့နိုင်ငံပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အချိန်အစောကြီးကတည်းက ဒီဘက် ရောက်လာတယ်။ အဲ့သလို ရောက်လာပြီးခုတော့ အသားတော်တော် ကျနေပြီ။ ဒါတွေကို တိုင်းရင်းသားလို့ တွက်ဆလို့မရဘူး။ ဟိုတုန်းကတော့ ဧည့်နိုင်ငံသားတွေ လုပ်တာပေါ့။ အဲ့ဒါကြီးကို ကိုယ့် နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးပါလို့ ဆိုလိုက်ရင် သမိုင်းပါ ပျက်သွားမယ်။
မေး- ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူဦးရေသိပ် သည်းစီးဝင်မှုသီအိုရီ(Population Density)နဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထဲစိမ့်ဝင်ဝါးမြိုခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီသီအိုရီအပေါ်မှာရော ဘဘလို တပ်မတော် ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုရှုမြင် မိပါသလဲ။
ဖြေ- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့မြေး သက်မြင့်ဦးရဲ့ စာအုပ်ထဲ မှာ မြန်မာနဲ့ တရုတ်ဆက်ဆံရေး၊ အိန္ဒိယ မြန်မာဆက်ဆံရေးကို ရေးထားတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာပါသလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကြားနေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတာကြောင့် အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ Population Density m Best ဖြစ်လာပြီး ဒီိနိုင်ငံဒုက္ခဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူးဝစ်ဆင်းဘက်ရဲ့ တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးစာအုပ်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိပ်စပ်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြီးဘက်ကလည်း တော်တော် အန္တရာယ် များလာတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲ့ဒါ က ဘာလည်းဆိုရင် တပ်မတော်ရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်း နားမလည်တဲ့အခါကျတော့ တရုတ်ကိုသွားပြီးအကူ အညီတောင်းရတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ တရုတ် နဲ့ပိုပြီးတော့ စီးပွားရေးတွေအားလုံးက တရုတ်ဘက်ပါကုန်ရော။
မေး- ဘဘအနေနဲ့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်မှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာအပေါ် ဘာများပြောကြား ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ- မကြာသေးခင်က ဂျွန်ဟောကင်း တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ ကားလ်ဂျက်ဆင်နဲ့အဖွဲ့တွေ အိမ်ကိုရောက်လာပြီး ဘဘကို မေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေပြည်တော်က ပြန်ဆင်းလာတာ ဟိုမှာ တရုတ်တွေကြီးပဲတဲ့။ အဲဒါဘာပြောချင်သလဲလို့မေးတယ်။ အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲ။
ဒီ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စက ဘင်္ဂလားနဲ့မြန်မာ ကြားမှာ ဖြစ်တာလေ။ ကိုသိန်းစိန်တောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွားဖို့ ခရီးစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းထားတယ်လေ။ ဒါမျိုးလေးတွေရှိတော့ တော်တော့်ကို ချိန်ဆရတယ်။ နိုင်ငံတွေကလည်း လူလည်လုပ်တာတွေအများ ကြီး။ အဲ့ဒီဟာ တွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုသိန်းစိန်အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ကို ကိုယ်တွယ် နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုသိန်းစိန်က ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပယ်လုပ်တဲ့ လူမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင်ထဲ က အရမ်းကို ရိုးရိုးသားသားနေခဲ့တာ။ သူရော သူ့မိသားစုရောပေါ့နော်။ အားလုံးက ဟိတ်ဟန်မရှိဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ ကိုသိန်းစိန်က ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်သွားမှာပါ””ဟု ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ချစ်ဆွေ(ခ)စာရေး ဆရာကြီး နောင်စစ်သည်က ၁၉၅၂ ခုနှစ် မှစတင်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော်၌ တာဝန် အဆင့်ဆင့် ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ဒီဇင်ဘာ(၇)ရက်နေ့၌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးဖြင့် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား ယူရာ ယခုတွင် နောင်လာနောင်သား မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အကျိုးဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စာပေရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်နေလျက်ရှိသည်။
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ပန်ကြားပါရစေ, သုတကဏ္ဍ, ပေးစာကဏ္ဍ
"မြန်မာအလုပ်သမ တစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီး ၅ထပ်တိုက်ပေါ်က ပစ်ချခံရ"
ဘန်ကောက်မြို့အနီး စမုတ်စာခွန်၊ မဟာချိုင် နယ်မြေ အုန်းနွဲ့ စိုင်းဟတ် ၆ထပ်တိုက်တွင် နေထိုင် သည့်အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ယမန်နေ့ နေ့ လည်ပိုင်းက ထိုင်းတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ၅ ထပ်အမြင့်မှ ပစ်ချခံရသဖြင့် ဆေးရုံတွင် အရေးပေါ် တင်ထားရကြောင်းမျက်မြင်များပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။ တိုက်နောက်ဖက် လဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ထိုင်နေကြသည့် ကိုမင်းဇေါ် က သူတို့ အနားသို့ ကျလာပုံ ကို ရှင်းပြသည်။
“မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်ပြီး အပေါ်ထပ် အခန်းအမှတ် ၅/၁၅၃ က မစန်းစန်းဝင်း ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ထမိန်တစ်ကွင်း စလွယ်သိုင်းပြီး ပြုတ်ကျလာတယ်၊ အလှူခံ အလှူခံ လို့ ပြောပြီး သတိ ရတချက် မရတချက် ပဲ။ ဆေးရုံရောက်တော့လဲ ဘယ်သူလဲလို့ မေးတော့ အလှူခံ အလှူခံလို့ ပြောတယ်။ ကျနော်လည်း အနားမှာ ရှိတဲ့ မမော်နဲ့ ထမီတစ်ကွင်းယူပြီးတော့ ၀တ်ပေးကြတယ်။ ကျနော်အဲဒီ ၅ထပ်ကို ပြေးတက် လာတော့ အသက် ၂၀ အရွယ် လောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန် နဲ့အရပ် ၅ ပေ လောက်ရှိတဲ့ ထိုင်းလူငယ် တစ်ယောက် ပြေးဆင်းလာတာနဲ့ လှေကားမှာတွေ့ တယ်” ဟုပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းရေကြည်မြို့နယ် နုံးကနိုင်ရွာ မှ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် မစန်းစန်းဝင်း သည် အုန်းနွဲ့ စိုင်ဟတ် တွင်ရှိသော တွန်းစွန် ကြက်သားအလုပ်ရုံတွင် ညဆိုင် အလုပ်လုပ်ပြီး အခန်းတွင်တစ်ဦးတည်း အိပ်နေ စဉ် အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် ထိုင်း လူငယ်တစ်ဦးက အလှူခံရန် တံခါးကို အပြင်း အထန်ခေါက်သဖြင့် ဖွင့်ပေးခဲ့သည်ဟု ယူဆကြောင်း အခန်း တွင် ရှိသော စုဗူးကိုရိုက်ဖွင့်ပြီး ဂွမ်းကပ် စောင် နှင့် အမျိုးသမီး အတွင်း ခံဘော်လီ တို့ ကစင်းကလျား တွေ့ရှိရသခြင်းနှင့် နောက်ဘက် မီးဖိုေ ချာင်တွင် အိုးခွက်ပန်းကန်များ ခြေရာလက်ရာမပျက် ရှိနေခြင်း တို့ ကြောင့်၎င်း မျက်နှာတို့တွင် အညိုအမည်း စွဲနေခြင်း တို့ ကြောင့် သူမမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးနောက် အပြင်းအထန် ရိုက်နှက်ခံရ သဖြင့် မေ့မျောနေစဉ် ငါးထပ်တိုက်ခန်းမှ ပြစ်ချခံ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုအောင် ကပြောသည်။
“ ကျနော်တို့ မှာ သားသမီးသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ကျနော့်မိန်းမ ကို ပြန်ပြီးတော့ အသက်ရှင်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးလို့ ဆေးရုံကတာဝန်ကျ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်၊ ဆေးကုခ ဘတ်ငွေ ၁၄၀,၇၀၂ ဖြစ်နေပြီလို့ တစ်ဦးက ညနေ ကဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာသံရုံး ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အတူ ကျနော်တို့ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်၊ဆေးရုံကိုလည်း သွားခဲ့ကြပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည့် ထိုင်းလူငယ်ထံမှ ကျကျန်နေခဲ့သည့် ထိုင်းအလှူခံစာရွက်အား တိုက်ပိုင်ရှင်က သိမ်းဆည်းထားသည်။ မစန်းစန်းဝင်း ကိစ္စရပ်အတွက် လိုအပ်သည့် ကူညီမှုများအား မြန်မာ သံရုံး အလုပ်သမား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း အတွင်းရေးမှူး မြန်မာသံမှူးကြီး ဦးနိုင်ထွန်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ BAT တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 7:26 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
” ပျော်ဘွယ်မြို့တွင် အစ္စလာန် ဘာသာဝင်များမှ မြန်မာ မိန်းကလေးတစ်ဦးအား မုဒိန်းကျင့်စော်ကားခြင်း”
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ရမည်သင်းခရိုင်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြို့သစ်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သော မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူငယ်(၂)ဦးမှ မုဒိန်းကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊
ဖြစ်စဉ်မှာ မြို့သစ်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သော မမြင့်မြင့်စန်း(၁၇)နှစ်(ဘ)ဦးနီတွတ် (အိမ်ထောင်ရှိ)သူသည် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ဗလီရှေ့တွင် ရောင်းချသော အစ္စလာမ်ဘာသင်ဝင် မူစလင်လူမျိုး ဇော်မျိုးဦးဆိုင်တွင် ပုံဂံဆေး သန့်ရှင်ရေးအလုပ်အား နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြောင်း၊ ပိုင်ရှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မူစလင်လူမျိုး ဇော်မျိုးဦး(မြန်မာအမည်)သည် ၄င်းနေထိုင်ရာ မြို့သစ်ရပ်ကွက် နေအိမ်တွင် အ၀တ်အစားများလျှော်ဖွတ်ရန်အတွက် မမြင့်မြင့်စန်းအား (၃-၇-၂၀၁၂)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် အိမ်သို့သွားရန် စေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
မမြင့်မြင့်စန်းလည်း သွေးရိုးသားရိုး အလုပ်ခိုင်းစေမှုဖြစ်သဖြင့် ၄င်းဇော်မျိုးဦးနေအိမ် ဘေးရှိ ရေတွင်းတွင် ၄င်းကုလားလူမျီုးများ၏ အ၀တ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပေးနေကြောင်း၊ထိုအချိန်တွင် ဇော်မျိုးဦးနေအိမ်သို့ မူစလင်လူမျိုး(အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်) (အရပ်အခေါ် ဘောကြီး) ရာဇာကျော်ဝင်း ရောက်နှင့်နေပြီး ၄င်းက မမြင့်မြင့်စန်းအား ပါးစပ်ပိတ် တွန်းလှဲပြီး ၊ သားမယား အဖြစ် အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ကြောင်း၊ ဇော်မျိုးဦး ကုလားမှလည်း မမြင့်မြင့်စန်းနောက်မှ နောက်ယောင်ခံ လိုက်လာပြီး ရာဇာကျော်ဝင်း(ဘောကြီး)ပြုကျင့်သည့်ကို အားပေးသည့် အနေဖြင့် မမြင့်မြင့်စန်းအား ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း၊ မမြင့်မြင့်စန်းသည် ၄င်းတို့ (၂)ဦးအား တွန်းလှန်ကာကွယ် ရုန်းကန်သည့် အတွက် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး သူမနေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကာ မိဘများအား တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း၊
(၁၄း၀၀)ချိန်တွင် မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ၄င်းဇော်မျိုးဦး၏ မိဘဆွေမျိုး (အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် )မူစလင်ကုလားများနှင့် စကားများ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားကာ (၁၈း၀၀)ချိန်ခန့်တွင် (၂)ဖက်စလုံးအား ရဲစခန်းမှ လာရောက်ဖြန်ဖြေပေးကာ ရဲစခန်းတွင် ပထမ သတင်းပေးတိုင်ကြားချက်အမှတ်(က-၁၃၀/၂၀၁၂)ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဇော်မျိုးဦးနှင့် ဘောကြီးတို့ (၂)ဦး အရေးယူရန်ပြင်ဆင်လျှက်ရှိကြောင်း၊၄င်းကိစ္စအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ သွားရောက်ဖျောင်းဖျပြောဆို လူစုခွဲရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 2:45 AM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post